Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamada JWXO oo saaka aroortii weerar ku qaaday Saldhigii Ciidamada wayaanuhu ku lahaayeen Tuulada cawlkudhal
Ciidamada JWXO oo saaka aroortii weerar ku qaaday Saldhigii Ciidamada wayaanuhu ku lahaayeen Tuulada cawlkudhal
Posted by Dayr	/ July 9, 2012
Saaka aroortii hore ayay Cutobyo ka tirsan Ciidamada JWXO, weerar kadis ah kuqaadeen Saldhigii Ciidamada wayaanuhu ku lahaayeen Tuulada cawlkudhal, oo qiyaastii 30 Km dhinaca waqooyi kaga aadan Magaalada Dh/buur.
ciidamada Gumaysigu, ma aysan samaynin wax iska caabin ah ee waxay noqdeen wax dhintay oo ay xabadii haleeshay iyaga oo jiifa iyo wax cagaha wax kadayay iyagoo qaawan oo kabahoodii iyo Dharkoodii kacararay, sababtoo ah waxaa laweeraray xili ay hurdo ku´mashquul sanaayeen, waardiyahoodiina wuu seexday, sidaa darteed iyaga oo hurda ayay badankooda xabadu haleeshay.
Waxaa la sheegay in qalab badan iyo qoryo badan laga furtay cadowga, qalabkaas oo ay kujiraan qoryaha BKM iyo AK47 aad ubadan.
Wali lama tirinin dhimashada cadowga laakiin, waxaa la xaqiijiyay in uu bakhtigoodu aad u badanyahay walina saldhigii waxaa jooga ciidamada JWXO. Faah faahinta dheeraad ah ayaan dib ka soo sheegi doonaa.
Waxaan marka hore salaamayaa ciidamada JWXO gacantu idinma go,do guula-
ysta waxyar ayaa idiinka hadhay ha daalina hana noogina Ilaahayna wuu idin la